Puntland oo si weyn looga Xusay Maalinta Dhalinyarada Adduunka – Radio Daljir
Agoosto 12, 2015 7:57 b 0
Arbaco, Ogoosto 12, 2015 (Daljir) —Xarunta Jaamacadda PSU ee magaalada Garoowe ayaa maanta waxaa kadhacday munaasabad ballaaran oo lagu xusayey maalinta caalamiga ah ee dhalinyarada aduunka oo sanadkasta laxuso 12-ka bisha Agoosto.
Munaasabadaan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda Puntland oo kaashanaysa, Hay’ado ay kamid yihiin DRC, MERCY CORP, UNICEF, dallado iyo ururo wadani ah oo kajira deegaamada Puntland.
Wasiirada caddaladda, shaqada, shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha, wasiir kuxigeenka waxbarashada iyo tacliinta sare, xubno katirsan xildhibaanada barlamaanka dowladda Puntland, agaasimayaal, Madaxda Hay’adaha bahwadaagta la ah, agaasimaha Machadka SIDRA iyo dhalinyaro ayaa ka qaybgalay xuska munaasabadda maalinta dhalinyarada aduunka.
Agaasimaha guud ee dhalinyarada iyo ciyaarah dowladda Puntland oo ugu horayn ka hadlay munaasabadda ayaa soodhoweeyey dhammaan martida ka qaybgashay xafladda, wuxuuna sheegay in sanadkaan uu yahay sanadkii bandhiga fekerka dhalinyarada Puntland.
Xildhibaano katirsan barlamaanka dowladda Puntland oo ka qaybgalay munaasabadda ayaa bogaadiyey waxqabadka wasaaradda waxaana ay dhalinyarada Puntland usoo jeediyeen inay dalkooda aaminaan una shaqeeyaan umaddooda.
Intaas kadib waxaa laguda galay qaybihii kala duwanaa ee munaasbadda waxaana lasoo bandhigay riwaayado iyo suugaan lagu cabirayey doorka dhalinyarada ee bulshada iyo dhibaatooyinka ay kala kulmaan tahriibka.
Wasiirkii hore ee wasaaradda deegaanka dowladda Puntland, ahna agaasimaha machadka horumarinta iyo faaqiqaadaada cilmi baarista Soomaaliya Guuleed Saalax Barre ayaa sheegay inay kaalin muuqata ka qaadan doonaan sidii loo ogaan lahaa dhibka dhalinyarada haysta iyo fekerkooda.
Mudane Guuleed Saalax Barre ayaa balan qaaday inay maalinimada khamiista ah qaban doonaan kulan cilmiyeed ay ku ururin doonaan afkaarta dhalinyarada oo ay lakaashan doonaan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda Puntland.
Wasiir kuxigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland Dr Maxamed Cali Faarax ayaa wasaaradda ka codsaday inay latimaado qorshe cad oo ay kuhagayso dhalinyarada Puntland, wuxuuna intaas kudaray inay muhiimtahay in dhlinyarada lajeheeyo.
Wasiirka shaqada, shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Axmed Cabdulle oo khudbadii sanadka jeediyey ayaa kahadlay shaqaalaysiinta dhalinyarada, kahortaga tahriibka, dejinta xeerarka dhalinyarada, dhismaha dalladii dhalinyarada iyo qodobo kale.
Wasiirka ayaa sheegay in dhalinyarada Puntland ay ka cowdaan inaysan haysan shaqo ay qabtaa, laakiin aysan ka go’onayn inay ka shaqeeyaan shaqooyinka gacanta laga qabto, wuxuuna sheegay in dhowaan 60-ka arday ee ugu sareeya Jaamacadaha wadanka ay Hay’aduhu qaadan doonaan.
Ugu dambayntiin awaxaa munaasabadda sooxiray wasiirka wasaaradda caddaaladda iyo arrimaha diinta dowladda Puntland Saalax Xabiib Xaaji Jaamac wuxuuna sheegay in dhalinyaradu ay yihiin kuwa dalka tiirka u ah ayna dowladda ku dedaali doonto horumarinta dhalinyarada iyo sidii caddaalad loogu samayn lahaa.
Dhismaha Golaha Deegaanka degmada Garowe oo Meel-Gabo Gabo ah Maraya